Waraaqda ku socota Romanka Bawlos wuxuu ku qoray: “Jacaylku kuma waxyeelo deriskiisa; sidaas oo hadda jacaylka sharciga loo oofiyo » (Rooma 13,10 EG). Dabiici ahaan waxaan u jeednaa inaan jeedinno oraahda "jaceylka ayaa buuxiyo sharciga" oo aan dhahnaa: "sharcigu wuxuu dhameystiraa jacaylka". Waxaan si gaar ah u dooneynaa inaan ogaano halka aan ku dhexjirno xiriirka. Waxaan rabnaa inaan si muuqata u aragno ama dejinno faanno sida aan u wada istaageyno kuwa kale oo aan u jeclaano. Sharcigu wuxuu dejiyaa heerka aan ku dhammaystiro jacaylka waana ay fududahay in la cabbiro marka loo eego haddii jacaylku yahay habka lagu dhammaystiro sharciga.
Dhibaatada sababtani waxay tahay in qofku sharciga dhawri karo asaga oo aan jacayl lahayn. Laakiin waad jeclaan kartaan adigoo aan sharciga fulinayn. Sharciga wuxuu sheegayaa sida qofka jecel uu u dhaqmayo. Farqiga u dhexeeya sharciga iyo jacaylka waa in jacaylku ka dhex shaqeeyo gudaha, qofna laga beddelo gudaha. Sharciga, dhanka kale, kaliya wuxuu saameeyaa banaanka, dhaqanka dibadiisa.
Tani waa sababta oo ah jacaylka iyo sharciga waxay leeyihiin mabaadi 'hagitaan oo aad u kala duwan. Qofka jacaylka lagu hoggaamiyo uma baahna tilmaamo ku saabsan sida loogu kalluumaysto jacaylka, laakiin qof sharciga hoggaamiya ayaa u baahan. Waxaan ka baqeynaa haddii aan lahayn mabaadii'da hagida adag, sida sharciga, kaasoo nooga baahan inaan si sax ah u dhaqanno, waxaa laga yaabaa inaanan u dhaqmin sida saxda ah. Si kastaba ha noqotee, jacaylka dhabta ahi kuma xirna shuruudo maxaa yeelay laguma qasbi karo ama laguma khasbi karo. Waxaa la siiyaa si xor ah oo si xor ah loogu soo dhoweeyaa, haddii kale jacayl ma aha. Waxay noqon kartaa aqbalaad saaxiibtinimo ama aqoonsi, laakiin ma aha jacayl, maxaa yeelay jacaylku shuruudo ma leh. Ogolaanshaha iyo ictiraafku badanaa waxay ku xiran yihiin shuruudaha badanaana waxay ku jahwareeraan jacayl.
Tani waa sababta sababta loogu yeero "jacaylka" ay si fudud uga adkaato marka dadka aan jecel nahay ay ka dhacaan filashooyinka iyo dalabkeenna. Noocan jacaylka noocan ahi nasiib darro waa aqoonsi oo keliya, oo aan siinno ama aan u diidno iyada oo ku xidhan akhlaaqda. Qaar badan oo inaga mid ah ayaa sidan ula dhaqma deriskeenna, waalidkeen, macallimiinteenna iyo madaxda sare, oo badanaa annaguna waxaan ula dhaqmeynaa carruurteenna iyo dadka kale ee aadanaha ah qaab aan lumin.
Laga yaabee in taasi ay tahay sababta aan ugula nuuxnayno fikirka ah in iimaanka Masiixu inagu inagu xadgudbay sharciga. Waxaan rabnaa inaan dadka kale wax ku cabbirno. Laakiin waxaynu ku badbaadnay nimco xagga rumaysadka oo haddana mar dambe uma baahna qiyaas. Hadduu Eebbe ina jecel yahay in kastoo ay dembiyadeenu dembiyadeenu leeyihiin, sidee baan ugu xukumi karnaa dadkeenna aadamiga ah si hoose oo aan u diidno jacaylka haddii aysan u dhaqmin si waafaqsan fikradaheena?
Rasuul Bawlos wuxuu sidan ugu sharaxay Efesos qaababka soo socda: «Runtii waa nimco saafi ah in aad badbaateen. Adiga naftaada waxba ma qaban kartid laakiin adoo kalsooni ku qaba waxa Ilaah ku siinayo. Wax ku kasbaday maahan inaad wax qabato; maxaa yeelay Ilaah ma doonayo in qofna isku halleeyo waxa uu higsanaayay » (Efesos 2, 8-9 GN).
Akhbaarta wanaagsan ayaa ah in lagu badbaadiyay nimco kaliya rumaysadka. Waad u mahadcelin kartaa taas, maxaa yeelay qofna ma jiro Ciise mooyee oo wuxuu soo gaadhay cabirka badbaadada. Ilaah ugu mahad naqa jacaylkiisa shuruud la'aanta ah, ee uu isagu kugu soo furtay, oo kugu beddelay dabeecaddii Masiixa!